EJamani: Kushunyayelwa ngetroli phambi kwenkampu yeembacu
Ukushumayela Kwiimbacu Nakubasebenzi
Intsimi yolwimi lwasemzini ikhulile eJamani ngenxa yeembacu ezininzi nabasebenzi abasuka kwamanye amazwe. Kutshanje, kwiinyanga nje ezisithoba kwaqaliswa amaqela eelwimi zasemzini ayi-229. Abavakalisi abamalunga ne-800 bangena iiklasi eziyi-30 zokufunda iilwimi eziyi-13.
Abazalwana bashumayela kwiindawo ezifikela kuzo iimbacu. Besebenzisa iitroli kwiindawo ezingaphezu kwe-200, abazalwana baye bahambisa iincwadi ezimalunga ne-640 000.
IQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba kubekho iphulo lokushumayela elikhethekileyo ukususela ngoMeyi ukuya kuJulayi 2016. Abavakalisi abamalunga ne-700 abathetha isiArabhu nabasuka kumazwe asixhenxe baya kwiindawo ezilishumi eOstriya naseJamani ukuze bashumayele kuma-Arabhu amaninzi kuloo mazwe.
Iingqekembe Zemali Endleleni
Abavakalisi abayi-50 abakwibandla lesiKriol eBelize badla ngokuhamba ngeenyawo xa besiya kwintsimi yabo. Abazalwana abaninzi abathath’ intweni kodwa banobubele. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, baqalisa ukuchola iingqekembe zemali ababezifumana endleleni ngoxa beshumayela. Ukususela ngoko, rhoqo ekupheleni konyaka bayadibana ukuze bahlambe le mali bayicholeyo, bayibale baze bayabe.
Nangona eninzi kule mali ingenaxabiso lingako, nyaka ngamnye baqokelela iingqekembe ezilingana ne-R3 270. Abazalwana basebenzisa isiqingatha sale mali ukuze bahlawule iindleko zeHolo YoBukumkani yabo, baze enye bayithumele entlanganweni ukuze kuxhaswe umsebenzi owenziwa ehlabathini lonke.
Kwakumamele Izigidi Ezine!
Esinye sezona ziganeko ziphambili kwimbali yabantu bakaThixo eBurundi senzeka ngoMatshi 5, 2016, xa uAnthony Griffin omela ikomkhulu watyelela elo lizwe. Loo ntlanganiso eyayenzelwe amabandla yasasazwa ilizwe lonke sisitishi salapho serediyo. Kuqikelelwa ukuba babezizigidi ezine abantu ababemamele!
Olu sasazo lwabangela ukuba iindaba ezilungileyo ziviwe ngabantu abaninzi ibe baninzi abancomayo. Omnye umsasazi wathi: “Nifanele nisasaze nezinye iintshumayelo ezinje!” Elinye igosa lesitishi serediyo lona lathi: “Ndicebisa ukuba niqhubeke nisenza iinkqubo ezinje, ibe ziya kusindisa imiphefumlo emininzi.” Iibhasi neeteksi ezininzi zazidlala le ntlanganiso kwiirediyo zazo.
Umculo Wathi Cwaka
Kusuku olungaphambi kweSikhumbuzo sango-2016, abazalwana beqela elikwanti eNepal bakhathazeka besakuva ukuba kuza kubakho isibhadlalala sekonsathi yomculo kwisikolo esikufuphi neholo ababeyiqeshile.
Ezo konsathi zidla ngokuba nengxolo enganyamezelekiyo. Njengoko abazalwana babecoca iholo kusasa ngemini yeSikhumbuzo, omnye umququzeleli wekonsathi wathi, “Akho kwanto niza kuyiva ngaphandle komculo wethu.”
Ikonsathi yaqalisa emini emaqanda ibe kwakukho ingxolo njengoko kwakulindelwe. Nangona abazalwana babeqeshe isandisi-lizwi esikhulu ngaphezu kweso babesifunile ekuqaleni, zange basive naxa babesivavanya befuna ukuva ukuba sikhala kangakanani. Abazalwana babethe loxo, kodwa ke bathandaza ngamandla. Kwathi xa kushiyeke imizuzu eyi-30 ngaphambi kokuba siqalise iSikhumbuzo, xa kanye kufika abazalwana abaninzi, suke wee-cwaka umculo! Abanye babantu ababesele babeqalise ukulwa, aza amapolisa ayivala loo konsathi. Abazalwana bakwazi ukuqhuba iSikhumbuzo kuthe cwaka kamnandi.
UGiuseppe nguvulindlela othe ngxi eItali. Usebenzela enye inkampani yeintanethi. Kulo Meyi sisuka kuye waya kwenye intlanganiso kunye nabantu asebenza nabo abayi-70, ukuze babonisane ngamacebo amatsha eyayifuna ukuwasebenzisa inkampani yabo. Ingqonyela yale nkampani yathi kukho iiwebhsayithi ezingumzekelo wale nto babefuna ukuyenza. Emva koko yababonisa umzekelo kwisikrini esikhulu. UGiuseppe wabamb’ ongezantsi xa wabona iphepha lokuqala le-jw.org kwisikrini. Le ngqonyela yathi, “Ayikho iwebhsayithi enjengale emhlabeni!” Emva koko yaqalisa ukuhlalutya izinto ezintle nge-jw.org. Yancoma indlela ekulula ngayo ukusebenzisa iilinki zayo nendlela eyenziwe kakuhle ngayo le webhsayithi.
UGiuseppe wathi: “Abantu endisebenza nabo bothuka xa babona indlela ezininzi ngayo iilwimi efumaneka ngazo le webhsayithi. Xa le ngqonyela yagqiba ukuthetha, umphathi wam wathi kuyo nakubaphulaphuli: ‘UGiuseppe liNgqina LikaYehova.’ Yona yathi kum: ‘Ifanele inconywe intlangano yenu. Ayikho inkampani okanye umbutho ongasoze ungathandi ukuba newebhsayithi enjengale yenu. Inoba nisebenza nzima nifaka inkcazelo entsha kwaye nisenza kube lula ngabantu ukusebenzisa le webhsayithi kwaye niqiniseka ukuba yonke into imi kakuhle.’ Ndandineentloni zokunconywa ngento endingayenzanga. Kodwa ndavuya xa abaninzi ababengawazi amaNgqina KaYehova beva izinto ezintle ngawo. Ngoku ndincokola rhoqo nabanye babantu endisebenza nabo ibe abathathu kubo ndibaqhubela isifundo seBhayibhile.” Ngoxa inkampani kaGiuseppe iqhubeka ifunda okuthile kwi-jw.org, yena uyaqhubeka ethetha nabantu asebenza nabo ngeBhayibhile.
Wala Ukudlala Ibhola
EArgentina: UJorge udlala ibhola nabazalwana
UJorge ngumfana osemtsha ohlala eArgentina. Ekuqaleni kuka-2010 uJorge weva iindaba ezilungileyo komnye umntwana owayefunda naye esikolweni. Emva koko wafunda iBhayibhile esebenzisa incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Ngelo xesha, wayedlala ibhola. Wayenesiphiwo, ibe wafunwa liqela elikhulu lebhola lifuna adlalele amabanga alo angaphantsi. Ngo-Aprili 2014 elinye iqela laseJamani lafuna ukumthenga. Wayenomdla wokuba ngumdlali webhola ohlawulwayo ibe wavuma ukuya kwelo qela. Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba aye eYurophu, umqeqeshi wakhe wathi kuye: “UliNgqina LikaYehova, andithi? Ungadlali ngobomi bakho ngokuya phesheya. Nam ndandiliNgqina ukukhula kwam. Ndathengwa lelinye iqela laseAsia. Bandithembisa izulu nomhlaba, nam ke ndathabatheka. Ndahamba nentsapho yam saya apho, kodwa sabuya imisila iphakathi kwemilenze.” UJorge uthi: “Amazwi akhe atsho kwathi xhokro entliziyweni, ibe ndagqiba ekubeni ndingayi eYurophu. Ngo-2015 ndaba ngumvakalisi ndaza ndabhaptizwa.”
Intsikelelo Yokwenene Simahla
NgoSeptemba 2015 kwaqhutywa iiNdibano Zengingqi ezinomxholo othi “Yiba NjengoYesu!” eKampala, eUganda. Batsho ngentswahla yovuyo ababelapho xa uMark Sanderson weQumrhu Elilawulayo wakhulula iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele ngesiLuganda.
Omnye umntu ofundelwa iBhayibhile wathi: “Ndavuya nyhani xa ndafumana le Bhayibhile! Ngelo xesha abantu babelungiselela ukuza kukapopu. Ukuze kwenziwe imali, iminqamlezo ekwakuthiwa isikelelwe yayithengiswa nge-R433. Abantu babezifuna zona iintsikelelo kodwa bengenayo imali. Mna ke ndafumana intsikelelo yokwenene simahla. UYehova wayinika bonke ababeze kwindibano ibe kwathiwa umntu makanikele xa efuna. Yonke imihla xa ndifunda iLizwi likaYehova ngolwimi lwam ndize ndimazi kakuhle, ndiziva ndisikelelwe. Ndiyambulela uYehova ngokundinika ikopi yam yeBhayibhile.”
Ngaba Iincwadi Ziprintwa Kwelemimoya?
Kuba babezama ukungcolisa igama le-www.jw.org, abanye abefundisi baseCongo (Kinshasa) bafundisa amarhamente abo ukuba iincwadi zamaNgqina KaYehova ziprintwa kwelemimoya. Bathi ubungqina bale nto bubonakala ku-“www,” besithi aba nobumba bamela inani u-666 elikwincwadi yeSityhilelo. (ISityhi. 13:18) Ngenxa yoko, ezinye izifundo zeBhayibhile zala ukuqhubeka nezifundo zazo.
Emva kokuyithandazela le nto, enye indoda nomfazi wayo abangoovulindlela bamema izifundo zabo zeBhayibhile kunye nabayeni bazo ekhayeni labo. Kweza amadoda amathathu nabafazi bawo, ibe emva kwesidlo la maNgqina ababonisa ividiyo ethi AmaNgqina KaYehova—Alungelelaniselwe Ukushumayela Iindaba Ezilungileyo. Ezi ndwendwe zatsho zabona ukuba ibubuvuvu yonke le nto beziyixelelwe ngeencwadi zethu. Kwiveki elandelayo, umyeni welinye laloo makhosikazi wathi aba vulindlela mabathathe umnikelo wayo we-R1 445 baze bawufake kumnikelo womsebenzi owenziwa ehlabathini, nangona yena wayengekafundelwa.
Ukufunda Iingoma Ezintsha
Nangona abazalwana belinye ibandla elikwiilali zasePapua New Guinea bengenayo i-intanethi, bafuna ngamandla ukufunda iingoma zoBukumkani ezintsha. Ngoko ke, iBandla LaseMundip lithumela umzalwana kwidolophu ekufutshane, ohamba ngeenyawo iiyure ezimbini aze aphinde ahambe ngebhasi ezinye iiyure ezimbini. Xa efika apho, ungena kwi-intanethi aze akhuphele amazwi eengoma ezintsha encwadini, agoduke, afike awabhale ebhodini enkulu kwiHolo YoBukumkani ukuze abonwe ngumntu wonke. Ibandla liyazikhuphelela ezi ngoma ukuze lilungiselele iintlanganiso. Bakuxabisa nyhani ukuthelela amabandla ehlabathini lonke ekuvumeni iingoma ukuze kunqulwe uYehova.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela Incwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2017